Faalo : – Imtixaanka M/weyne Farmaajo u yaal ma wax ka qabashada Abaaraha iyo Dulmiga Shabeelada Hoose baa mise waa la muranka Imaaradka Carabta !!!! | puntlandi.com
Wednesday, March 8th, 2017 | Posted by Al
Faalo : – Imtixaanka M/weyne Farmaajo u yaal ma wax ka qabashada Abaaraha iyo Dulmiga Shabeelada Hoose baa mise waa la muranka Imaaradka Carabta !!!!
Sidaan la wada socono 8-dii bisha Febraayo ee sannadkan 2017 waxaa soo gabagaboobay doorashooyinkii labda aqal ee wakiilada iyo midkii madaxtinimo ee dalka.
Doorashooyinkaas ayaa horseeday inuu dalka ka dhacay isbadel siyaasadeed oo hogaanka dalka loo doortay Madaxweyne Maxamed Cabdullahi Farmaajo.
Isbedelkaa siyaasadeed ee dalka ka dhacay iyo doorashada Madaxweyne Farmaajo ayaa taageero weyn iyo soo dhaweynba ka helay dhamaan shacbiga Soomaliyeed ee ku dhaqan dalka gudihiisa iyo dibadiisaba.
Taageerada shacabka Somaaliyeed u yabooheen Madaxweyne Farmaajo iyo isbadelka siyaasadeed ee dalka ka dhacay ayaa salka ku haysa laba sababood oo biyo kama dhibcaan ah.
1. Sababta kowaad oo ah,shacbiga soomaliyeed oo oon iyo haraad u qabay isbadel siyaasadeed oo lagu sameeyo hayadihii sharci dejinta (Barlamaanka) iyo hogaankii sare ee dalka (Madaxweyne iyo Raisal Wasaare) oo shacbiga somaaliyeed u arkeen in ay ku fashilmeen, in ay wax ka qabtaan hawlihii dastuuriga ahaa ee loo igmaday afartii sano ee ay xilka hayeen iyo iyagoo loo arkay kuwo ku mashquulay mooshino iyo dagaalo siyaasadeed oo joogta ah oo dhaxedooda ah ( madaxada ugu sareysa ee dalka ),musumaasuq, colaado iyo dagaalo sokeeye oo xukuumadu dabda ka riixeysay iyo amnigii iyo xasiloonidii dalka oo gacanta ka baxay.
2. Sababta labaad ee keentay taageerada weyn ee shacbigu u muujiyey isbedelkii dalka ka dhacay iyo doorashadii Madaxweyne Farmaajo ayaa ah rajo iyo yadadiilo uu qabo shacbiga somaaliyeed ee ku nool dalka gudihiisa iyo dibadiisaba oo ah in dib loo yagleelo mar kale dawladnimadii iyo sharaftii ummada Somaaliyeed.
Shacbiga somaaliyeed ayaa ku taamaya,kana rajeynaya Madaxweyne Farmaajo iyo xukumadiisu in ay garwsadaan in dhibaatada dalka ka jirtaa ay tahay mid asmo daakhili ah ( dhibaato shacbiga soomaliyeed iyagu abuureen, iyaguna isu geysteen, xalkeedana iyaga laga rabo in ay keenaan ) Waajibka laga filaayo Madaxweyne Farmaajo iyo xukuumadiisana waxaa ugu horeeya in dalka iyo dadka somaaliyeed u horseedaan dibu heshisiin taam ah, soo celiyaan xasiloonidii dalka,sareynta sharciga iyo sugida cadaalada bulshada iyo midka muwaadinka somaaliyeed,sidoo kale in ay la dagaalanto musuqmaasuqa iyo boobka hantida guud ee shacbiga, iyo in ay soo celiso adeegyadii bulsho ee asaasiga ah.
DHAGARTA GAFANYAASHA ( PRESSURE GROUPS)
Mudadii dhowr iyo labaatanka sano ah ee dalku deganaansho la’aanto siyaasadeed iyo jahawareerka bulsho ku jiray waxaa soo baxay kooxo gafanyaal ama dhiigmiirto ah, oo abaabulan iskuna xiran,kuna sugan dalka gudihiisa iyo dibadiisaba.
Kooxahaas gafanyaasha ah (Pressure groups) oo ah kooxo shanba ceyn ah, qoryo ismaris ah,maalin walba midabka iyo muuqaalka ay dani ugu jirto soo labista, ayaa ka kooban Ganasato xaaran ku naax ah, manaxayaal iyo mafio hantidii dalka iyo dadkba xoog ku haysta, shakhsiyaad calooshooda u shaqeystayaal ah oo ka xoogsada dilka shacbiga iyo dilaalka siyaasada guracan,kuwo balaayo imaankii ka qaaday oo NJO-yada iyo gargaarka biniaadanimo xatooyadooda faylasha u sita habeen iyo maalinba,sidoo kale firqooyinka diinta ku lafaruuga sida ( Al-Shabaab,Al-Islaax,Damul-jadiid,Al-Sheekh,Xarakada Daljir,Ehelusuna,Raafidiyiinta cusub ama Shiico ) oo waayadan danbe ka farqabsaday dhaqaalaha ay bixiyaan dawladaha danaha khaaska ah ka leh Somaaliya,Kooxo anti-Federalism ah iyo kuwo cadaawad u qaba maamul goboleedada dalka ka jira, dhamaan kooxahaas iyo kuwo badan oo ili ma qabato ah oo habeenkii guda, oo kaashanya warbaahinta aan waxba ka xishoon, waxay ka mideysan yihiin hal ujeedo oo ah in aan mar dambe nidaam sharci,kala dambeyn iyo dawladnimo somaaliyeed dalkan ka hirgalin ( Dawladnimo-diid).
Kooxaha gafanyaashi ahi waxay mar walba abaabuulaan, marar badana ku guuleysteen in dhagraan rayul caamka bulshada somaaliyeed,sidoo kale waxay bohol ka tureen dhamaan xukumadihii kala danbeeyey ee dalka soo maray mudadii buruburka.
Kooxahan dawaldiidka ah iyagoo adeegsanya hayado cilmi baarisyo gacan ku rimis ah oo iyaga u adeega iyo qalabka warbaahintu waxay rayul caamka ku khaldaan darsaad iyo cilmi baarisyo laga been sheegayo xaqiiqda dhabta ah ee dalka ka jirta iyo sababha keenay mashaakilaadka iyo aafoyinka siyaasadeed ee dalka ka jira.
Waxay abaabulaan kacdoono iyo xiisado bulsho oo lagu lifaaqayo maaweelooyin siyaaseed oo dhalanteed ah, ama riwaayado rakhiis ah oo lagu mashquulinayo shacbiga somaaliyeed iyo xukuumadaha cusub ee socod baradka ah, ee laga filaayo ama loo doortay in ay wax qabad la taaban karo dalka iyo dadka ku soo kordhiyaan.
Kooxha magafayaasha ah waxaa astaan iyo sumad lagu garto u ah 26 sano in dhibaatada siyaasadeed ee dalka somaaliya ka jirta ay ku xawilaan, oo ku eedeeyaan dawlado iyo gacmo shisheeye,si ay shacbiga somaaliyeed ugu mashquuliyaan waxaaney waxba ka faa’iideyn,iyaguna ay fursad ugu helaan in ay ka tabcadaan hawlahooda dawladiidka ah.
Markaad dib u milicsato taariikhada dawladihii ina soo maray mudadii burburka waxaad ka dheehan kartaa in xukuumad kasta markay xafiiska qabtay lagu asqeysiiyey dabeylo iyo mawjado siyaasadeed, iyagoo qoorta loo galiyey dawladaha deriska ama qeybo ka mid ah deeganada somaaliyeed,si loo fashilyo.
Sidoo kale waxaa shacbiga somaaliyeed ee gudaha iyo dibadba uu la mid noqday ( Dibiga doolo dhagihiisu waxsanba ma maqlaan) waxaa dhegaha loogu shubay borobogaan been ah,cadaawada qabaa’il somaaliyeed, caadifad waalan iyo naceyb dawlado shisheeye oo aanay waxba iska khuseynin iyo.
Dawladii Allaah ha unaxariistee Cabdullaahi Yusuf kooxaha gafanyaasha ahi si ay uga nabadgalaan una curyaamiyaan,waxay kooxha dawlad diidka ahi ku kiciyeen sidii cadadoodu aheyd qeybo badan oo ka mid ah shacbiga somaaliyeed, iyagoo adeegsanya slogan ah,ama hal kudhigyo maqaar saara ah oo ahaa ” Dalkii buu Axmaaro soo geliyey”.
Sidoo kale Xukumadii Madaxweyne Sheekh Shariif Sheekh Axmed waxay ku shaabadeeyn halheyskii caanka ahaa ee (Shariif Murtad) waxayna ooda ka soo qaadeen oo ay magaalada Muqdishana soo galiyeen una adeegsadeen kooxda ay isla qaraabtaan ee Al-shabaab,kuwaas oo hor istaagay waxqabadkii iyo barnaamijkii ay dejistay xukumadii Sheekh Shariif.
Sidoo Kale kooxaha gafanyaasha ahi waxay markiiba afduubeen dawaldii uu madxada ka ahaa Madaxweyne Xasan Sheekh,iyagoo markii ay dhalateyba qoorta u galiyeen oo ku mashquuliyeen, dhexdoodana cadaawad ka abuureen dawladii Federaalka aheyd iyo Maamul goboleedka Somaaliyeed ee Jubbaland iyo dawlada Keenya.
Xurguftaas iyo macno la’aantaa siyaasadeed waxay keentay in dawladii Xasan Sheekh uu meeqamkii siyaasadeed ka lumo,aakhirkiina waxay keentay in Ethoipia kala dhiciso Sheekh Axmed Madoobe iyo Xasan Sheekh.
Sidaa si la mid ah maanta waxay kooxaha gafanyaash-dawlad-diidka ahi bilaabeen ololayaashoodi dhagarta xambaarsanaa ee ay ku kicin jireen shacbiga somaaliyeed,isla markaana ku marin haabin-jireen xukuumadaha cusub.
Maanta xukuumada Madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo haysta taageerada shacibaga ayey kooxaha gafanyaashu rabaan in ay u tilmaamaan cadow dhalanteed ah,markan kooxaha dawlad-diidka ah slogankoodu waa dawlada Imaaradka Carabta.
Gebagebadii nin somaaliyeed oo hore baa laga hayaa ” War sow goroyo ima barato ”
Waxaa la gaaray wakhtigii shacbiga somaaliyeed garowsan lahaa in ” xabaal iyo ninkeed waa loo kala tegay “ Somaaliya soomali baa leh,Somaaliya dhibkeeda Somaali baa abuurtay,xalkeeduna iyada ayuu u yaal.
Somaaliya maanta waxaa soo celin kara hogaamiye hal adag oo runta u sheega,una horseeda dibu heshisiin,midnimo,isla markaana u jiheeya shaqo adag iyo isku tashi,waa hogaamiyahaas midka maanta Somaaliya dhibka ay ku jirto ka saari kara.
Laakiin daneysi,dulmi,musuqmaasuq,Tamashle,laab la kac,khuraafaad,guulwadeyn iyo khudbado iyo balanqaadyo maran oo baalaxoofta ahi waa wixii Aabahay dilay,adna Aabaha iyo Awoowgaa khatalay,aakhirkiina keenay in Aduunka laynaga naco.